Inkinga yokugcina ye-OnePlus 5 ithinta umsindo lapho siqopha amavidiyo | Izindaba zamagajethi
Ukukhishwa kwakamuva kwe-OnePlus 5 kuthinta umsindo lapho urekhoda amavidiyo
Izinkinga ze-OnePlus zibonakala zivamile njalo lapho kwethulwa i-terminal entsha emakethe. Ngokwethulwa okusha ngakunye, abafana bakwa-OnePlus baqala ukubeka amabhethri, hhayi ukulungiselela ukuletha ngokushesha ama-terminals, kodwa futhi nokuzama ukuxazulula inani elikhulu lezinkinga ezilethwa amadivayisi lapho zifika emakethe.
Ngenhlanhla, inkampani isebenza ngokushesha futhi ilungisa izinkinga kepha kuyisithombe salowo nalowo emphakathini lokho ayishiyi endaweni enhle kakhulu ngaphandle kokuba yi-terminal enezici ezinhle kakhulu ngentengo equkethwe. Inkinga entsha ethinta i-OnePlus 5 ithinta ukuqoshwa komsindo wamavidiyo.
Ngokusobala futhi njengoba sikwazi ukubona kuvidiyo engenhla, abasebenzisi abaningi abakhononda ngokuthi lapho beqopha amavidiyo, idivayisi iqopha umsindo kodwa esiteshini esiphambene. Kule vidiyo singabona ukuthi uma uqopha umculo, isibonelo esisikhombisa ngokusobala inkinga yedivayisi, Uma siletha idivaysi ngakwesokunene, izwakala ngesipika sangakwesokunxele semishini yakho futhi okuphambene nalokho. Ngaphandle kokuthi unekhompyutha enezipikha ezimbili ezihlukene noma uyilalele ngamahedfoni, ngeke ukwazi ukubona inkinga.
Le nkinga ingaxazululwa kalula ngokuvuselelwa kwesoftware, ngoba ngokusobala le nkinga ikhiqizwa kuphela uma siqopha endaweni evundlile, hhayi lapho siyibeka mpo, isikhundla sokuqopha amavidiyo okufanele sinqatshelwe, ngoba lapho sidlulisa okuqukethwe kukhompyutha noma kuthelevishini, akusivumeli ukuthi sikujabulele konke okuqukethwe okuzungeze isenzo esisirekhodayo, sikususe ngokuphelele kumongo, umongo kwesinye isikhathi obaluleke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ukukhishwa kwakamuva kwe-OnePlus 5 kuthinta umsindo lapho urekhoda amavidiyo
AbakwaSamsung basebenza kumahedisethi wangempela we-standalone
INetflix ilungisa amanani amasha eSpain ngokusho kokuvuza kwamuva